FANAPARIAHAM-BAOVAO OFISIALY: Tafapetraka ny « Dépêche Informative Taratra » – Free News
mardi, 21 septembre 2021 - 7:41
ANDRY RAJOELINA TAO ITASY : « Efa jamban’ny fankahalana izay tsy mahita ny asa ataontsika »
SERASERA: Nohavaozina sy nomena fampitaovana ny TVM sy RNM Ambatolampy
TALE JENERALIN’NY SERASERA: “Tsy misy famotehana ny asa fanaovan-gazety mihitsy ataon’ny Minisitera”
ANDRY RAJOELINA TAO ANTSIRANANA: « Valiantsika amin’ny asa ny fanaratsiana »
FITANTANANA NY BAOLINA KITRA: Manome fito andro ny federasiona hiantsoana fivoriambe ireo filohana ligy
Lanonana fanaovam-beloma sy fitsofan-drano : Mendrika alain-tahaka ny zava-bitan’ ny Jly Ravalomanana Richard
FAHAMAIZANA AO ANKARAFANTSIKA: Mitohy ny famonoana ny afo, efa mandeha ny fanadihadiana
MINISITRA LALATIANA ANDRIATONGARIVO : « Tsy mampihemotra ahy amin’ny fijoroako ny fanenjehana »
Antananarivo, MGA 6	℃
Ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo.
Accueil/Samihafa/FANAPARIAHAM-BAOVAO OFISIALY: Tafapetraka ny « Dépêche Informative Taratra »
FANAPARIAHAM-BAOVAO OFISIALY: Tafapetraka ny « Dépêche Informative Taratra »
Nisy ny fampahafantarana sy fanokanana ny fanapariaham-baovao ofisialy « agence de presse depeche informative Taratra » omaly tetsy Anosy. Ity ivon-toerana vaovao ity izay tsy hafa fa ampahany tamin’ny ANTA teo aloha ihany, saingy hisahana tanteraka kosa ny lafiny fanapariaham-baovao ofisialy, indrindra ny avy eo anivon’ny Fitondram-panjakana. Isan’ny antom-pisiany, noho izany, ny ady amin’ny tsaho sy ny honohono izay miha mahazo vahana.
Lucien R. 17 juillet 2021
Efa tany amin’ny Repoblika voalohany no nisy ny ANTA na ny Agence Nationale d’information Taratra, hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina. Ankoatra ny asa fitahirizana sary izay tena nahalalana azy, dia isan’ny niantoka ny famoaham-baovao ofisialy ihany koa ity ivon-toerana ity. Nihalefy tsikelikely anefa ny lanjan’ity ivontoerana ity nandritra ireo Fitondrana nifandimby taty aoriana rehetra, ary efa saika tsy nisy intsony mihitsy aza tamin’ny fotoana nandraisan’ny Minisitera ankehitriny ny fitantanana tamin’ny taona 2019. Nanao fanamby, noho izany, ny Minisitera ny hitondrana fanavaozana, izay nitohy hatramin’ny fanovan-drafitra goavana hanomezana herijika sy aim-baovao indray ity ivon-toerana ity.
Nozaraina roa miavaka tsara, araka izany, ny asan’ny ANTA teo aloha, ka ny fitehirizana ireo sary tsy tontan’ny ela manamarika ny tantaram-pirenena na ilay antsoina hoe “Archives Iconographiques” dia lasa eo ambany fiahian’ny Tranombokim-pirenena, izay vao notokanana ihany koa ary nomena ny anarana hoe « Trano Sary ». Ny fanapariaham-baovao kosa dia nafindra ho eo ambany fitantanan’ny fitalevana ambonin’ny serasera, ary dia napetraka ho fitaleavana iray mitokana mihitsy ary nomena ny anarana hoe « Dépêche Informative Taratra ».
Zo fahazoana vaovao marina
Araka ny fanazavana, ny « Fanapariaham-baovao Taratra », dia hanao ny asan’ny atao hoe « Agence de Presse Nationale » na ny ivom-panapariaham-baovaom-pirenena. Hizara sy hanome ny vaovao rehetra tokony ho fantatry ny olom-pirenena ara-potoana araka izany ny « Dépêche Informative Taratra ». Tanjona kendrena amin’ny fametrahana izao Fanapariaham-baovao ofisialy izao ny hanafoana ny tsaho sy ny honohono izay miteraka savorovoro eny anivon’ny fiaraha-monina, araka ny fanazavana hatrany. Nambaran-dRamatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo, fa mamaritra soa aman-tsara ny zo fototra iantohan’ny lalàm-panorenen’ny Repoblikan’i Madagasikara ao amin’ny andininy fahafolo ny fahazoana vaovao. Manamafy izany ny andininy faha 7 amin’ny lalàna 2020-006 momba ny serasera amin’ny haino vaky jery, izay manambara fa zo ny fahazoana vaovao marina. Ho fampiharana ireo andinin-dalàna ireo indrindra, hoy hatrany ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, no antom-pisian’ny « Fanapariaham-baovao Taratra ». Vaindohan-draharahan’ny Minisitera ankehitriny tokoa ny fampivoarana ny sehatry ny serasera eto Madagasikara.
Notontosaina omaly nanoloana ny tokotaniben’ny ORTM Anosy, ny lanonana ofisialy nampahafantarana ny fanapariaham-baovao ofisialy « Agence de Presse Dépêche Informative TARATRA ». Tonga nanome voninahitra izany ary nanokatra sy nanolotra ny toerana misy ity fanapariam-baovao ofisialy ity, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, notronin’ireo mpiara-miasa aminy sy ireo vahiny manan-kaja samihafa izay nanome voninahitra ny lanonana. Natolotra ary naseho tamin’ny fomba ofisialy omaly ihany koa ny Foibe toeran’ny « Depeche Informative Taratra », ao amin’ny Rihana faha-efatra, Bâtiment ORTM Anosy, niaraka tamin’ireo ekipa mandrafitra an’izany. Ny fanapariaham-baovao ofisialy Taratra dia azo tsidihina ao amin ‘ny tranonkala http://depeche-taratra.mg/.
LALANA MIFEHY NY SERASERA 2020-006: Miantoka ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety
EKIPA MALAGASY ROBOTIKA: Nitsidika ny orinasam-pamokarana rano fisotro vokarin’ny STAR
AKADEMIAM-PIRENENA HO AN’NY ZAVAKANTO SY KOLONTSAINA (ANAC): Ho vita amin’ny Janoary 2021